Pogba oo shaaca ka qaaday sirta ka dambeysa inuusan kala soo muuqan koobka aduunka 2018 sheekada layaabka leh ee la xiriirta timahiisa – Gool FM
Pogba oo shaaca ka qaaday sirta ka dambeysa inuusan kala soo muuqan koobka aduunka 2018 sheekada layaabka leh ee la xiriirta timahiisa
Dajiye July 30, 2018
(Manchester) 30 Luulyo 2018. Ciyaaryahanka reer France ee Paul Pogba ayaa wuxuu shaaca ka qaaday sirta ka dambeysa inuusan koobka aduunka kala soo muuqan sheekada cajiibka ah ee ku aadaneyd qaab sameysa timihiisa.
Xidiga kooxda Manchester United ayaa ugu jawaabay dhowr su’aalo ay jamaahiirta ku xiran qaab ciyaareedkiisa kula wadaageen bartiisa Instagram-ka.
Paul Pogba ayaa la kulmay dhaleeceeno kala duwan, sababa la xiriira inuu si ka bad badis ah uu ugu mashquulo muuqaalkiisa iyo isticmaalka faraha badan ee baraha bulshada inta lagu gudi jiro xili ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Hadaba Pogba ayaa la weydiiyay su’aal ku aadan sababta uusan koobka aduunka 2018 ugu mashquulin muuqaalkiisa cajiibka ahaa, wuxuuna ka jawaabay si uu u helo nabad galyo.
“Waxaan doonayay inaan helo nabad galyo, si aan diirada u saaro qaab ciyaareedkeyga, sidaasi darteed ma dooneynin inaan ku mashquulo muuqaalkeyga”.
“Sidaas darteed ma jirto cid hada heli karta marmarsiyo, xukunka wuxuu haatan noqon doonaa kubada cagta oo kaliya”.
“Cristiano waa dhamaad”… madaxweynaha kooxda Napoli Aurelio De Laurentiis oo weeraray Ronaldo
Sokratis Papastathopoulos oo siiyay talo ku saabsan magaciisa ciyaartoyda iyo taageerayaasha Arsenal!
dhanka ciyaraha la in kuma gara ,dalka dhaxdisa wad kawada tan lkn gobolada qar idacada kama shidna ama kama cimamadna sida bay iyo bakol.internet aya jira live stream ka wad kama qan tihin marka goladas hadan laga cimamadi Karin live streamka hanogola cimamada.